Ichibi elimangalisayo Marion Getaway
Ngo-420 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Kubuyekezwe i-1200 sq ft ekhaya enamagumbi okulala ama-3, amabhavu ama-2 agcwele anompheme ongaphambili osikiwe anokubukwa kwechibi okuyingxenye kanye nompheme ongemuva ovulekile wama-sunbathers. Igceke elikhulu langaphambili nangemuva elinendawo eningi yokugcina isikebhe sakho.
Umugqa wesibili eLake Marion e-Goat Island (Summerton). Itholakala endaweni enokuthula nephephile enokufinyelela echibini nokwethulwa kwesikebhe, kanye neGoat Island Restaurant kuqhele ngemizuzu emihlanu!
Indawo ekahle yokubaleka amantombazane noma uhambo lokudoba nabangane bakho.
ILake Marion ingaphesheya komgwaqo futhi sinokubuka okuyingxenye kwechibi. ngezansi nje komgwaqo kukhona ukwethulwa kwesikebhe esikhokhelwayo namatheku. Indlu yethu iyindawo ephumulele, enokuthula lapho ungazipholela khona. Yindawo enhle yokuhamba nezinye izindlela eziningi zokuhamba izintaba uma usuka kude. Indawo yokwethulwa kwezikebhe yamahhala iqhele ngemizuzu emi-5 kuye kweyi-10 futhi inezindawo zokudoba okudoba kuzo.
Sinayo indawo enkulu yokubeka izimoto engafaka isikebhe ku-trailer, ezotholakala ukuze isetshenziswe kuze kube maphakathi noFebruwari ka-2022. Ngemva kwalokho, indawo yokubeka izimoto ngeke isatholakala nganoma yini enye ngaphandle kwemoto.
I-wifi esheshayo – 420 Mbps
Indawo ethulile, ephephile enengxube yendawo yokuhlala yesizini nesikhathi esigcwele. Ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya endaweni yokuphuzela utshwala/indawo yokudlela.
Nakuba ngingeke ngitholakale mathupha, ngiyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo noma ukukhathazeka ongase ube nakho.